नेपालमा कम्युनिष्टको नाममा नवधनाढ्यहरु जन्मिए- कडायत
भीमबहादुर कडायत, नेता, नयाँ शक्ति नेपाल
भीमबहादुर कडायत हालसालै नेकपा (माओवादी केन्द्र) छाडेर नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका हुन् । माओवादीमा छँदा पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका उनी पूर्वमन्त्री तथा सुदूर पश्चिमका स्थापित नेता हुन् ।
लामो समय कम्युनिष्ट राजनीतिमा बिताएका कडायत आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा किन यसबाट अलग्गिए त ? यसै विषयमा हामीले उनीसँग कुराकानी गरेका छौँ-
नयाँ शक्तिमा प्रवेश गर्ने क्रममा पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईबाट पार्टीको विधान ग्रहण गर्दै भीमबहादुर कडायत
लामो समय कम्युनिष्ट राजनीति गर्नुभयो, अहिले आएर नयाँ शक्तिमा लाग्नुभएको छ, किन रोज्नुभयो नयाँ शक्तिलाई ?
नेपाली काँग्रेसको सात सालको क्रान्ति, एमालेको झापा आन्दोलन र त्यसपछि दश वर्षे जनयुद्धको बलमा आज मुलुक गणतन्त्रमा आयो । अहिले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको योजना लिएर नयाँ शक्ति आयो डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा । यो हाम्रो मुलुकका लागि अन्यन्तै आवश्यक छ । पुराना शक्तिका जतिपनि कार्यक्रम र आन्दोलनहरु भए त्यसको प्रतिफल भनेको नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यी सबै कुरा प्राप्त भइसकेपछि नयाँ शक्तिले जनताका लागि आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशा ल्याएको छ । त्यो अनिवार्य देखेको हुनाले मैले नयाँ शक्तिलाई समर्थन गरेको हुँ । अब नयाँ शक्तिकै कार्यदिशाअनुसार जनतामा जान्छु ।
लामो समय कम्युनिष्ट राजनीति गरेको मान्छे अचानक नयाँ शक्तिमा आवद्ध हुनुभयो, गैरकम्युनिष्ट बन्यो भनेर आलोचना भइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
हो अहिले मुख्य आरोप त्यही छ । कम्युनिष्ट पार्टीको लिडरसिप जो छ, तपाईंले देख्नुभयो । लामो समय जनआन्दोलन हाँकेका वैद्य एकातिर, विप्लव एकातिर प्रचण्ड एकातिर । तर, यसबीचमा बाबुरामजी मुलुकको आवश्यकता, वस्तुस्थिति र वास्तविकताअनुसार अघि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँले ढाँट र पाखण्डीपन देखाउनुभएन । तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जति पनि हाम्रा नेताहरुको बलिदान छ, त्यो बलिदान जनताले दिए, कार्यकर्ताले दिए । तर यहाँ नेपाली जनताको गरीबीलाई भजाएर कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा राजनीतिमात्र गर्न खोजियो । रियल कम्युनिष्टहरु नेपालमा देखिएन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सबैभन्दा ठूलो मर्म भनेको ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । त्यो नयाँ शक्तिले त्यागेको छैन, र बाबुरामले त्यागेका छैनन् ।
त्यसपछि मार्क्सवाद, लेलिनवाद छ, त्यो एउटा साधन हो । कम्युनिष्ट बन्ने भनेको नामले हुने होइन, व्यवहारले हुनुपर्छ । नामले हुने भए त सत्तरी-असी वर्षको इतिहास छ नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको । आखिर के गर्‍यो त ? आज एकदिनमा हजारदेखि पन्धसयसम्म मान्छे खाडीमा जान बाध्य छन् । लाखौंलाख मानिसहरु आज हिन्दूस्तानको गल्लीमा छन् । देशमा के परिवर्तन भयो ? एउटा राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अरु त केही पनि परिवर्तन भएको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा एउटा धनाढ्य वर्ग नेपालमा पैदा भयो । त्यो कम्युनिष्ट पार्टी आफैँमा चाहिँ गलत त थिएन त । तर त्यसको व्यवहारमा परिवर्तन आयो । हिजो चप्पल नहुनेहरु आज काठमाडौंमा बिल्डिङ ठड्याउने, पजेरोमा हिँड्ने, आफू रमाउने तर जनताको बिजोग छ । त्यसतर्फ नहेर्ने ? अहिले तलब-भत्ता नै एक लाख तीस हजार खान्छन् नेपालका सांसदहरु, तर जनताको स्थिति नाजुक छ । अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर छतबाट हाम फालेर मर्नुपर्ने अवस्था छ । नेताहरु भने करोडौं रकम खर्च गरेर कोही सिंगापुर त कोही अमेरिका धाइरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट सरकारमा छ-छ जना उपप्रधानमन्त्री भए यो देशमा । दुई मन्त्रालयलाई चार बनाइयो । कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट सिधै क्याबिनेटबाट करोडौंपति तथा अरबपतिलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि लाखौँ रकम दिने निर्णय भयो । त्यसैले यहाँ कम्युनिष्ट भनेरमात्र होइन, व्यवहारले हुनुपर्‍यो नि ।
तर यहाँ नेपाली जनताको गरीबीलाई भजाएर कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा राजनीतिमात्र गर्न खोजियो । रियल कम्युनिष्टहरु नेपालमा देखिएन् ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले नाम मात्र बेचे । ट्रेडमार्क मात्र बेचे । तर, वास्तविक कम्युनिष्ट कोही भएनन् । सबै पाखण्डी र ढोंगी छन् । त्यसैले यो नयाँ शक्ति आएको छ । नेपाललाई कम्युनिष्ट र डेमोक्र्याटहरुले मात्र उँभो लाउँदैनन् भनेर नै म नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेँ ।
नयाँ शक्तिले समृद्धि ल्याउँछौँ भनेको छ, तीव्र गतिमा विकास गर्छौँ भनेको छ, के यसलाई सम्भव देख्नुहुन्छ ?
त्यो त नेपाली जनताको हातमा छ । नेपाली जनताले मन, वचन र कर्मले बाबुरामको नेतृत्वको नयाँ शक्तिलाई एकचोटी मौका दिनुपर्छ । मेरो विचारमा एक न एक चोटी नेपाली जनताले हेर्नेछन् । दुई कोठाको घर बनाउँदा पनि इञ्जिनियर चाहिन्छ । जनयुद्धदेखि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँ (डा. भट्टराई) ले मुलुककै लागि खर्चिनुभएको छ । हरेक पार्टीमा माननीय हुनका लागि मन्त्री हुनका लागि काटमार भइरहेको छ । उहाँले तीन वर्षको अवधि बाँकी नै हुँदा खाइपाइ आएको सेवा-सुविधासहितको सांसद पद त्यागिदिनुभयो । यस्तो गर्ने नेपालमा अरु कोही छ ? यो एउटा उदाहरण हो ।
राजधानीका बाटाहरु हेर्नुस्, त्यसपछि उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा हेर्नुस्, सबैकुरा बाबुरामले व्यवहारमा देखाएका छन् । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने काँग्रेस-एमालेले मात्र यो मुलुममा सत्ताइस वर्ष शासन गरे । आखिर के परिवर्तन आयो त ? त्यो त देखिनु पर्‍यो नि जनतामा । तपाईंको रोजगारीको सवालमा हेर्नुहोस्, कुनैपनि क्षेत्रमा के भयो त ? मोटाउनबाहेक आफ्नो निजी स्वार्थ आफ्ना आसेपासे बाहेक त केही देखिएन । अहिले गाँउदेखि केन्द्रसम्म करीब एक लाख मान्छेहरु यस्ता छन्, जो चाहे माओवादी केन्द्रका हुन्, चाहे काँग्रेसका हुन् या एमालेका नै सबै बजेट कसरी कुम्ल्याउने अनि कसरी धनी बन्ने भन्ने ध्याउन्नमै लागेका छन् । अनि कसरी बन्छ यो देश ?
यहाँले बाबुरामको कुरा गर्नुभयो, बाबुराम त एक व्यक्ति भए । पार्टी चल्न त पद्धति चाहिएला, पुरानामाभन्दा नयाँमा पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि प्रणाली के फरक पाउनुभयो र नयाँ शक्तिमा लाग्नुभयो ?
यो चाहिँ अहिले पूर्ण भइसकेको छैन । पार्टी प्रथम अधिवेशनको तयारीमा छ । त्यो अधिवेशनले यसको विधि, विधान सम्पूर्ण कार्यविधि तयार गर्न बाँकी नै छ । जतिपनि छ यो अन्तरिम कालमा छ यसका विधानहरु, प्रतिवेदनहरु र पार्टी पनि अहिले अन्तरिम कालमा छ नि त । त्यसैले मलाई के आशा छ भने नेपाली जनजीवनका सम्पूर्ण शक्तिहरु चाहे तपाईं कर्मचारी भन्नुहोस्, चाहे कलाकार, चाहे एमाले वा काँग्रेस अर्थात् हरेका ठाँउबाट हिमाल-पहाड-तराई, थारु-आदिवासी-जनजाति सम्पूर्णको संगमको रुपमा यो स्थापना भएको छ । त्यसैले गर्दा यसको भविष्य नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि एउटा उज्यालो प्रकाशको रुपमा मैले देखेको छु ।
हिजो माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो अहिले नयाँ शक्तिमा हुनुहुन्छ । अब भीम कडायतलाई मान्छेहरुले नयाँ शक्तिको नयाँ मान्छे भनेर चिन्नुपर्यो त्यसमा तपाईंको के-के छन् नयाँ प्रतिबद्धता ?
जस्तै ०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि ०४६ सालको आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेसले गरेका हरेक आन्दोलनहरुमा मैले साथ दिएको हुँ । त्यो बेलाको नयाँ चिज भनेको काँग्रेस थियो । दुई तिहाइ ल्याएको पार्टी हो । त्यसमा म आबद्ध नभएर म तत्कालीन माले पार्टीमा म अछाम जिल्लामा संगठित भएर लागेको हुँ । परिवर्तनको बाहक तत्कालीन नेकपा माले भनेर म लागे । त्यसबेला काँग्रेस पुरानो भइसकेको थियो । त्यो पार्टी सरकारमा गयो । एकाउन्न सालमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । त्यसपछि तिनीहरुका क्रियाकलाप पनि हामीले देखेका छौं । त्यो सबै नेपाली जनतालाई अवगत नै छ । तेस्रो शक्तिको रुपमा पनि देखाएको हो नि जनताले । त्यसपछि दश वर्षे जनयुद्ध हाँकेर नेपालमा कसैले कल्पना नगरेको राजाविनाको देश देख्ने दिन आयो । माओवादीका प्रचण्ड-बाबुरामले देशलाई नयाँ उचाइ दिए । त्यसबेला मैले एमालेभित्र भएको सबै लगानी त्यागेर माओवादीलाई साथ दिएँ । राजा हटेको थिएन । संविधानसभा घोषणा भएको थिएन । सबैभन्दा पहिला एकता गरेको हुँ मैले त्यो पार्टीसँग । दश वर्ष लगातार मैले त्यस पार्टीलाई साथ दिएँ । तर नतिजा के भयो ? वैद्यलाई नचाहिने, बाबुरामलाई नचाहिने अनि विप्लवलाई नचाहिने भनेपछि, भीम कडायत त एमालेबाट आएको हो नि त ! मैले साथ दिए । मैले साथ दिएपछि अब विकल्प खोज्नुपर्‍यो । विकल्प के हो त भन्दा नयाँ शक्ति । अहिले विकल्प भनेको नयाँ शक्ति नै हो । माओवादी आन्दोलनको स्पष्ट कार्यदिशा लिएर कुनै छलकपट नगरी बाबुराम नेपालका सबै आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरेर नेपाली जनतालाई पनि सम‌ृद्धितर्फ डोहोर्‍याउने अभियानमा हुनुहुन्छ । बाबुराम त एउटा सिम्बोल मात्र हो । गर्नुपर्ने त हामीले हो नि त ! हामी वरिपरी गोलबन्द भइराखेका छौं । नयाँ ध्रुवीकरण भइराखेको छ । हामी सबैले गरेर हुने कुरा हो त्यो । एउटै व्यक्ति त सबैथोक हुँदैन, त्यसैले गर्दा यो ठीक छ ।
चुनावको हल्ला चलिरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले नयाँ शक्तिलाई कसरी देख्न पाउलान् ? कस्तो छ अनुमान ?
त्यो हामीमा निर्भर छ । नयाँ शक्तिमा आवद्ध भएका नेता-कार्यकर्ताहरु जति छौं देशभरीमा हामीले लगातार एक वर्ष जनताको घरघरमा गएर नयाँ शक्तिको उद्देश्य अवगत गराए हाम्रो खस्कँदो स्थिति हुँदैन ।
माओवादीमा छोडेर आउनुभएका यहाँका शुभचिन्तक मित्र या कम्रेड के भनौं, लाई के छ यहाँको सन्देश ?
एउटा यही सन्देश हो कि नयाँ शक्ति जो छ, नयाँ परिवेश छ । म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, भारतमा भाजपा र भारतीय काँग्रेस आइ भन्ने छ मैले जीवनभरीमा ति दुई पार्टी संयुक्त सरकारमा आएको देखेको छैन । अस्ति भखैरै अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकनको त्यत्रो चुवाव भयो । डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन एउटै ठाँउमा बसेर सरकार बनाएका छैनन् । तर नेपालमा त सत्ताका लागि जे पनि हुन्छ । काँग्रेस-कम्युनिष्टको सरकार पनि बन्छ । त्यसको आधार के त ? सबै मिलिजुली खाउँ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । अब देशले यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसैले पनि नयाँ शक्तिलाई एकचोटी साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु । नयाँ शक्तिलाई एक मौका दिनुहोस् भन्ने मेरो अपिल छ ।